အသိပညာ 2019 ၏ပဟေဠိ - အခမဲ့ဂိမ်း | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အသိပညာ 2019 ၏ပဟေဠိ - အခမဲ့ဂိမ်း
အသိပညာ 2019 ၏ပဟေဠိ - အခမဲ့ဂိမ်း APK ကို
အခက်အခဲများစွာ 4.000 အဆင့်ဆင့်ကျော်ပြန့်နှံ့5+ trivia မေးခွန်းများကို
, သမိုင်း, အားကစား, ပထဝီ, နည်းပညာနှင့်အများအပြားပိုပြီးအပါအဝင်အသိပညာ၏ 16 အမျိုးအစား
ဖွင့ ်. အော့ဖ်လိုင်း
အသစ်သောမေးခွန်းများကိုနှင့်အမျိုးအစားနှင့်အတူမကြာခဏမွမ်းမံမှုများ (မေးခွန်းများကိုဒေတာဘေ့စဧပြီ 2018 ၏နောက်ဆုံးပေါ် update ကို)
အသိပညာတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ သင့်ရဲ့အထွေထွေအသိပညာစမ်းသပ်ရန်! အသိပညာများပဟေဠိတစ်ခုမျိုးစုံရွေးချယ်မှုလူမှုရေးပဟေဠိဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤလောက၏အရာကြွင်းလေနှင့်သင်၏အသိပညာနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်!
သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်း၏ဖန်တီးသူကနေ "Rich Get", "ယူရီကာ" နှင့် "ပညာရေးဆိုင်ရာ Hangman" အသိပညာများပဟေဠိတွေ့မြင်!
ဒါကြောင့်ပညာတတ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကတီထွင်ဖြစ်ကြောင်း 4.000 မေးခွန်းများကိုထက်ပိုမိုပါဝင်သောကြောင့်အသိပညာများပဟေဠိအဆုံးစွန် trivia ပဟေဠိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အပေါ်ပထဝီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေ, အားကစား, ဒဏ္ဍာရီ, နာမည်ကြီးတွေနဲ့ရှိပါသည်။ လူတိုငျးအတှကျမေးခှနျးတှေရှိပါတယျ!
•သင်သည်အသီးအသီးမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ 20 စက္ကန့်ရှိသည်။
•သင်သည်3ဘဝတွေကိုရှိ
•တတန်းအတွက်5မှန်ကန်သောအဖြေကို, သင်တဦးတည်းအသက်တာကိုရရှိ
အင်္ဂလိပ်✓ကျော် 2000 မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကို
✓က Android operating system ကိုအတူအားလုံးမိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်ပီစီထောက်ပံ့ပေးသည်။
အဆိုပါမေးခွန်းများကိုအမျိုးအစား 16 ပိုင်နှင့်အပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ updated နေကြသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအမျိုးအစားနေသောခေါင်းစဉ်:
• Space ကို
များစွာသောအခြားအသေးအဖွဲဂိမ်းမတူဘဲအသိပညာများပဟေဠိအချိန်မရွေးအော့ဖ်လိုင်းဖွင့ ်. ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းမက်ထရိုရက်နေ့တွင်, ကားထဲတွင်သင်နှင့်အတူယူသို့မဟုတ်သင်ဘတ်စ်ကားကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်နေစဉ်အမြန်ဂိမ်းကစား။
သင်သည်အခြားကစားသမားများ၏ရန်သင့်အသိပညာနှိုင်းယှဉ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းစာရင်းသင်၏မြင့်ရမှတ်တင်ပြရန်။ သင့်ရဲ့အသိပညာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် In-ဂိမ်းအောင်မြင်မှုသော့ဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံ,
ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ရှိသည်ဆိုမှတ်ချက်များပေးပို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပညာများပဟေဠိ, ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ (အစဉ်အမြဲ) trivia ပဟေဠိလုပ်ကူညီဖို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အသိပညာ 2019 ၏ပဟေဠိ - အခမဲ့ဂိမ်း
13.95 ကို MB